အမည်မသိစာအုပ်:5အမည်မသိစာအုပ်
စင်္ကာပူနိုင်ငံ ရောက်နေတဲ့ ဝင့်ဝါတစ်ယောက်မှာ စူပါမားကက်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေရင်း အလုပ်နှင့် နီးသော တိုက်ခန်းတွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့သည်..။ တရုတ်လူမျိုး အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် တရုတ်ဘာသာစကားက ပြည်ပရောက်သော သူမတို့အဖို့ အလွန်အရေးပါလှသည်..။ ဝင့်ဝါ ကံကောင်းချင်တော့ အခန်းဖော်က မြန်မာနိုင်ငံဖွား တရုတ်ကပြားမ တစ်ယောက် ဖြစ်ကာ စရောက်ကတည်းက အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် တရုတ်စကားကို ထမင်းစား ရေသောက်တော့ ဝင့်ဝါ ပြောတတ်နေပြီ..။ အလုပ်မှာလည်း အဆင်ပြေကာ သူဌေးနှင့်လည်း ပနံသင့်လှသဖြင့် ဝင့်ဝါ ကံကောင်းလှသည်..။ စကာင်္ပူ ဒေါ်လာ (၁၈၀၀) ရသော အလုပ်မို့ မြန်မာငွေနှင့် ဆို ဆယ်သိန်းကျော်လောက် လစဉ် ဝင်ငွေ ရှိနေသည်..။ မိဘတွေက သူမ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်က ဆုံးပါးသွားခဲ့သဖြင့် သူမကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သော ဦးလေးတို့ လင်မယားကို လစဉ် (၃) သိန်းကျော် ထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့သည်..။ ဒါ့အပြင် တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ သမားမို့ နိုင်ငံခြားမှာ စားရေး သုံးရေးက အစ အဆင်ပြေစွာ နေနိုင်ခဲ့သည်..။ စင်္ကာပူရောက် အချို့ မြန်မာမတွေလို မိဘပို့ပေးတဲ့ငွေနဲ့ ကျောင်းလာတက်၊ အသုံးအဖြုန်းကြမ်းကြတဲ့အခါ ငွေလိုအပ်တဲ့ အချိန် စပွန်ဆာရှာ၊ စပွန်ဆာအကြိုက် မိမိတို့ အသွေးအသားတွေကို ပေးလှူနေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ဝင့်ဝါက သာပါသည်။ နောက်ပြီး ချစ်သူရည်းစားလဲ မထားခဲ့..။ ဝင့်ဝါက ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်မလေးမို့ ယောက်ျားတွေကို ကြောက်ရွံ့နေတာကြောင့် အေးဆေးနေခဲ့တာ သုံးနှစ်လောက်ရှိခဲ့ပြီ..။ အလုပ်နားရက်မှာ တစ်ချို့တွေ .. ဘဲနှင့် လျှောက်လည်နေကြချိန် အခန်းဖော်နှင့် ဝင့်ဝါကတော့ အခန်းထဲမှာ..။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်မြို့တည်း သားချင်းတောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြပေမယ့် သူများနိုင်ငံမှာတော့ ရွှေမြန်မာတွေ တည့်ကြသည်..။ မြန်မာအချင်းချင်း ခင်ကြ မင်ကြ၊ နောက်.. ကြိုက်ကြ၊ အဲဒီနောက်မှာ လိုးကြ ခံကြပေါ့..။ ယောက်ျားနဲ့ ကလေးရှိကြတဲ့ အအိုမတွေကလည်း အပျိုလုပ်ပြီး ရည်းစားထား၊ နောက် အတူနေ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာကို ဝင့်ဝါ ကြားနေမြင်နေ ရသည်..။ နောက်မှ ကွိုင်တွေတက်ပြီး အရှုပ်တွေ ပေါ်လာကာ ပြဿနာ ဖြစ်ကြတာတွေ ကို ဝင့်ဝါကြောက်သည်..။ ဒါကြောင့်လည်း အေးအေးဆေးဆေး ပဲ နေခဲ့တာ…။ ဝင့်ဝါ အေးအေး နေသလောက် အခန်းဖော် တရုတ်ကပြားမ ကျင်သီဆွေကတော့ ပွေးချက်က ကမ်းကုန်သည်..။ အသားက တရုတ်မဖြစ်တာကြောင့် ဖွေးဆွတ်နေကာ ပြည့်ဖြိုးတဲ့ အသားဆိုင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်..။ တကယ့် စင်္ကာပူ နိုင်ငံသူတစ်ယောက်လိုပင်..။ တရုတ်စကားကလည်း ကျွမ်းကျင်တာပါသည်..။ ကျင်သီဆွေက ရသမျှ လစာကို အကုန်လုံး သုံးနေသူမို့ ဝတ်တာစားတာက တကယ့် ဟော့ရှော့..။ နောက်ပြီး ဘဲတွေကလည်း တစ်ပွေပြီး တစ်ပွေ ထားသည်..။ တစ်ခါတစ်လေ နှစ်ယောက်သုံးယောက် တစ်ပြိုင်တည်း ..။ သူတစ်ယောက်တည်း ပတ်ရှုတ်နေသူ..။ ဒါပေမယ့် ကျင်သီဆွေရဲ့ စိတ်က တစ်မျိုး..။ ဘဲတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ နေနေ သူမရဲ့ ဆန္ဒက လိုးနေခံနေတုန်းခဏသာ ပြည့်ဝကျေနပ်သည်..။ နောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ထပ်မနေချင်တော့..။ ကျင်သီဆွေရဲ့ ကာမစိတ်ရမ္မက်က လိင်တူ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အတူ ပျော်ပါးရခြင်းကို စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်သူ တစ်ယောက်ပင်..။. ဒါကြောင့် အခန်းဖော် ဝင့်ဝါကို ဖူးဖူးမှုတ်မတတ် ချစ်ခင်သည်..။ သူမရဲ့ စိတ်ရမ္မက်တွေအတွက် ဝင့်ဝါနှင့်အတူ ဖြေဖျောက်ရတာကို နှစ်သက်သည်..။ ပလာဇာအောက်တွင် ရောင်းချသော ယောက်ျားတန်ဆာအတု ဆိုဒ်စုံဝယ်ထားပြီး ရုံးအားရက်တွေတွင် ဘဲတွေကိုခေါက်ထားကာ ဝင့်ဝါနှင့်အတူ လိင်တူ ဆက်ဆံကြသည်..။ နှစ်ယောက်သား မျော့မျော့သာ ကျန်တဲ့အထိ အချီပေါင်းများစွာ ပြီးမှ ကျင်သီဆွေတစ်ယောက် ရပ်တော့သည်..။ ဝင့်ဝါမှာလည်း တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က ကိုယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးတဲ့ ကာမအရသာ မစို့မပို့လေးကို ခု ရေခြားမြေခြားမှာ လိင်တူမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့မှ ဖွတ်ဖွတ်ကြေအောင် ခံစားတတ်လာခဲ့ရတော့သည်..။ ဦးလေးဖြစ်သူ လေဖြတ်သွားကြောင်း ကြားသိရချိန်တွင် ဦးလေးမိန်းမ အန်တီငြိမ်းထံသို့ပင် သူမတို့ရဲ့ အဖော် လိင်တုကြီးတစ်ခုကို ပို့ပေးကာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စ်ိတ်ဆန္ဒအတွက် နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ ကာမအရသာထူးကြီးကို သိရှိ ခံစားတတ်ခဲ့ပြီ..။ သို့ပေမယ့် ဝင့်ဝါတစ်ယောက် လူဖြစ်ရကျိုး မနပ်သေးပါ..။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လီးဆိုတဲ့ သက်ရှိ အချောင်းကြီး သူမစောက်ဖုတ်ထဲ အဝင်မခံရဘူးသေးပေ..။ တက္ကသိုလ် တက်စဉ်က ကျူတာဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အကြင်နာမိုးများ အောက်မှာလည်း ယစ်မူးသာယာခဲ့ဖူးသည်..။ သူမရဲ့ ရင်သားမို့မို့မောက်မောက်တွေက ထိုဆရာရဲ့ လက်ဝါးပြင်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်ခဲ့ဖူးသည်..။ သူမတင်သား ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ခြင်းကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ခံခဲ့ဖူးပါသည်..။ ဒါပေမယ့်………။ အပျိုအရွယ်လေးမို့ အထိအတွေ့အောက်မှာ သာယာနစ်မူးခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ အပျိုစဉ်ဘဝလေးကိုတော့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်..။ အဲဒီအတွက် ကံကောင်းမှုက အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ချစ်ဦးသူအကြောင်းကို စောစီးစွာ သိရှိကာ ရှောင်ဖယ်နိုင်ခဲ့ပြီး ယောက်ျားတွေကို ခပ်စိမ်းစိမ်းပဲ ဆက်ဆံခဲ့တော့သည်..။ စင်္ကာပူသို့ ရောက်တဲ့အချိန်ကတည်းက အခန်းဖော် ကျင်သီဆွေက ဝင့်ဝါကို အစစအရာရာ ကူညီခဲ့သည်..။ မိဘတွေ မရှိတော့တဲ့ ဝင့်ဝါကို ကျင်သီဆွေက စာနာ သနားခဲ့သလို အိမ်ထောင်ကွဲ မိသားစုမှ ကျင်သီဆွေကိုလည်း ဝင့်ဝါက ဂရုဏာ ပိုခဲ့ရသည်..။ ဒီလိုနှင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုတွေကနေ စိတ်ရမ္မက် အာသာဖြေဖျောက်ဖော်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြရတော့သည်..။ ဝင့်ဝါရဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်တန်စစ်စစ် မဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ စောက်ဖုတ်အုံဖောင်းဖောင်း နုနုရွရွကြီးကို ကျင်သီဆွေက လီးတုကြီးနဲ့ ပက်ပက်စက်စက် ထိုးဆွကလိကာ လိုးပေးခြင်းကို ဝင့်ဝါ နှစ်သက် ကျေနပ်နေတတ်ပြီ..။ ကျင်သီဆွေရဲ့ လီးပေါင်းစုံ အလိုးခံဖူးတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလည်း ဝင့်ဝါ ဖြဲကာ လျှာထိုးယက်ပေးခဲ့တဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းတော့။ ဒီလို လိင်တူ မိန်းမနှစ်ယောက် စပ်ယှက်ရတဲ့ အရသာကို ညပေါင်းများစွာ ဖြတ်ကျော်ပြီး ဝင့်ဝါတစ်ယောက် ယောက်ျားတွေကို မေ့ထားနိုင်ခဲ့သည်..။ ကျင်သီဆွေကတော့ ဘဲတွေ တစ်ပွေပြီး တစ်ပွေ ထားကာ ရည်းစားတွေ အလိုကျ အလိုးခံပြီး သူမအတွက် အလိုးခိုင်းစရာ သတ္တဝါတစ်ကောင်လောက် အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်..။ ထို ဘွိုင်းဖရင့်တွေကို ဝင့်ဝါနဲ့ စောက်ဖုတ်ချင်း ပွတ်ကာ အရသာ ယူရတာလောက် ဖီလင် မထား..။ ဒီလိုနဲ့ ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ နေ့ရက်တွေက တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကုန်လွန်လာခဲ့သည်..။ အလုပ်ခွင်ဝင်လာတဲ့ ရက်တွေက ရက်မှန်ခဲ့သဖြင့် ဝင့်ဝါတစ်ယောက် ခွင့်တစ်လရကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တအလည်ပြန်ခွင့် ရခဲ့သည်..။
“ ဝင့်ဝါရယ်… ဆွေတော့ .. ဘယ်လိုနေခဲ့ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးကွယ်…”
“ ဆွေရယ်… ဝင့်ဝါ ပြန်လာမှာပေါ့..အဲဒီကျမှ အတိုးချပြီး ချစ်ကြမယ်လေ…နော်…ခစ်ခစ်..”
“ မြန်မြန် ပြန်လာခဲ့နော်… ဝင့်ဝါ…”
“ အင်းပါ..ဆွေရဲ့… ဒါနဲ့ ဆွေအခုလက်ရှိ ဘဲက ဆွေ့ကို စိန်လက်စွပ်နဲ့ လက်ထပ်ခွင့် တောင်တယ်ဆို….”
“ ဟင်းဟင်း… ဝင့်ဝါရယ်..ဆွေက အဲဒါ ဘာလုပ်ရမှာတုန်း… စိန်လက်စွပ်က ဟိုတစ်ခေါက်က အတူနေတုန်းက လီးစုပ်ပေးလိုက်တာကို ခိုက်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စပါကွာ.. ဆွေကတော့ စိန်လက်စွပ်ထက် အဲဒီကောင် ဆွေ့ဖင်ပေါက်ကို ယက်ပေးတာပဲ ပိုခိုက်တာ…ဟင်းဟင်း…….”
“ ဆွေပြောတော့ အဲဒီကောင်က ဒီနိုင်ငံသားဆို… သူ့ကိုယူလိုက်ရင် ဆွေ အေးဆေး ဖြစ်သွားပြီပဲ…”
“ ဆွေ စဉ်းစားထားပါတယ်… ဆွေ သူ့ကိုယူလိုက်ရင် ရလာမယ့် အခွင့်ရေးတွေက မနည်းဘူးကွ… ဝင့်ဝါအတွက်လည်း အဆင်ပြေအောင် ညှိပြီးမှ ဆုံးဖြတ်မှာပါ..”
စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးတွေက မြင့်လှသဖြင့် ဘယ်သူမဆို လက်မလွှတ်ချင်ကြ..။ ဝင့်ဝါရဲ့ အခန်းဖော် ကျင်သီဆွေကတော့ ဒါတွေထက် ဝင့်ဝါရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့လေးတွေကိုပဲ မက်မပြေနိုင်ပဲ အာရုံရှိနေသည်..။ ဒီလိုနဲ့ ဝင့်ဝါတစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခေတ္တ ခြေချခွင့်ြ့ပန်ရခဲ့ပြီး ဦးလေးနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူတို့ထံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ရတော့သည်..။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးတစ်ယောက် မင်းမင်းနှင့် ဖြစ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း အနှစ်နှစ်အလလ ငတ်မွတ်တောင့်တမှုတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်းနေခဲ့မိတော့သည်…။ ရုံးတက်ရက်ဆိုလျှင် အိမ်ပြန်ချိန်၌ မင်းမင်းနှင့် အချိန်းအချက် ပြုကာ အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး ညဝက်လောက်အထိ ထင်တိုင်းကျဲ လိုးကြဆော်ကြသည်..။ ပိတ်ရက်တွေဆိုရင်တော့ အိမ်ဖော် အဒေါ်ကြီးကို အနားပေးကာ တစ်နေကုန် တစ်ညလုံး မင်းမင်းကို အိမ်ခေါ်ထားပြီး နှစ်ဦးသား ကာမအရသာထူးကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ခံစားခဲ့ကြသည်..။ လူငယ်ဖြစ်တဲ့ မင်းမင်းက နှာထန်လှတဲ့ မငြိမ်းငြိမ်းဦးရဲ့ ရမ္မက်ဆန္ဒတွေကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်..။ အောကား ဖွင့်ကာပြပြီး အဲဒီအထဲက ပုံစံတွေအတိုင်း လိုးကြဆော်ကြသည်..။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးတစ်ယောက် ..သူမရဲ့ တူသားအရွယ် ကောင်လေး မင်းမင်းက စေခိုင်းရာ ကရတဲ့ ကာမရမ္မက်ထန်တဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေးတစ်ရုပ် ဖြစ်နေပါတော့သည်..။ မခံစားဖူးတဲ့ ကာမအရသာဆန်းတွေကို မင်းမင်းက ခံစားတတ်စေခဲ့သည်..။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးက မင်းမင်းနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ နေရာ ဆိုတာ မရှိတော့..။ အပေါက်စုံအောင် အလိုးခံခဲ့ရဖူးပြီ..။ စုပ်ခဲ့ရဖူးပြီ..။ မှုတ်ခဲ့ဖူးပြီ..။ မငြိမ်းငြိမ်းဦးဟာ ကာမရမ္မက်ရဲ့ သားကောင်ဆိုလည်း ဟုတ်နေပြီ ဖြစ်သည်..။ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလို ခံစားနေရတဲ့ ကာမအရသာဟာ တူမတော် ဝင့်ဝါ ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ လစ်ဟာခဲ့ရတော့သည်..။ ဒါကြောင့် မငြိမ်းငြိမ်းဦးတစ်ယောက် အိပ်ရာထက်မှာ လူးကာလွန့်ကာ ဖြစ်လို့နေရတော့သည်..။ ဒီလို မငြိမ်းငြိမ်းဦးတစ်ယောက် ရမ္မက်ဆန္ဒတွေနဲ့ လူးလှိမ့်ကာ သူမကို လိုးခဲ့ ဆော်ခဲ့တဲ့ မင်းမင်းရဲ့ လီးကြီးကို မှန်းဆ တမ်းတနေတုန်းမှာပဲ….
“ အန်တီငြိမ်း…. ဝင့်ဝါ ပို့ပေးလိုက်တဲ့ ဟာကြီး မသုံးကြည့်ဖူးလား…”
စင်္ကာပူက အချစ်ဆုံး အခန်းဖော် ကျင်သီဆွေရဲ့ အထိအတွေ့တွေကို သတိရနေတဲ့ ဝင့်ဝါတစ်ယောက် အန်တီငြိမ်းနဲ့ သစ်ဆန်းတဲ့ အထိအတွေ့ကို ခံစားကြည့်ဖို့ မငြိမ်းငြိမ်းဦး အခန်းထဲ သို့ ဝင်လာစဉ် ကုတင်ပေါ်မှာ စိတ်ကူး ဖီလင်ယူနေတဲ့ အန်တီငြိမ်းကို ကြည့်ပြီး မေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်..။ အတွေးအာရုံထဲမှာ နစ်မျောနေတဲ့ မငြိမ်းငြိမ်းဦးဟာ တူမတော်ရဲ့ ရုတ်တရက်အမေးစကားကြောင့် ဆွံ့အကာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်သွားသည်..။
“ မရှက်ပါနဲ့..အန်တီငြိမ်းရဲ့ .. ဝင့်ဝါလဲ အန်တီငြိမ်းလိုပဲ လိုအပ်လာလို့ လာခဲ့တာ…သိလား… ၊ ဝင့်ဝါတို့ အတူတူ ဖြည့်ဆည်းရင်း ပျော်ကြမယ်လေ…နော်..”
ဝင့်ဝါက အခန်းတံခါးကို စေ့ပိတ်လိုက်ပြီး အသင့်ယူဆောင်လာတဲ့ စင်္ကာပူက ပါလာတဲ့ လီးတုကြီးကို ကိုင်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ လှမ်းတက်လာတော့သည်..။ အခန်းထဲက လင်းထိန်နေတဲ့ မီးချောင်းရောင်အောက်မှာ ညဝတ်အင်္ကျီ ကိုယ်စီနှင့် မိန်းမပျိုတစ်ယောက်၊ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ပူးကပ်သွားကြ၏။
ကျမဟာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် လင်ငယ် ကာမဘီလူးလေး မင်းမင်းနဲ့ လိုးခဲ့ကြတဲ့ ခံစားမှုတွေကို စားမြှုံ့ပြန်ပြီး ဖီးလ် ယူနေတုန်းမှာပဲ တူမတော် ဝင့်ဝါဟာ ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်..။ ခုတော့ ကျမရဲ့ ရင်သားထွားထွားကြီးတွေကို ဖျစ်ညှစ်ကိုင်တွယ် စမ်းကြည့်ပြီး ညဝတ်အင်္ကျီခါးမှ ကြိုးစလေးကို ဆွဲဖြုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်..။ ဝတ်လစ်စလစ် ဖြစ်သွားတဲ့ ကျမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ခုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်ပြီး ဘေးမှ နေရာယူလိုက်ကာ ဝင့်ဝါကိုယ်တိုင်လည်း သူမညဝတ်အင်္ကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်…။
“ အန်တီငြိမ်းကို ဝင့်ဝါရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ လက်တွေ့ပြမယ်…၊ အန်တီငြိမ်း ခံစားကြည့်ပေါ့…..အင်း….ဟင်း….ဟင်း…….”
ဝင့်ဝါက ကျမရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို ဖိကပ်စုပ်နမ်း လိုက်ပါတယ်…။ ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့ ပက်ပက်စက်စက် ထိတွေ့အလိုးခံဖူးပေမယ့် ဒီလို မိန်းမချင်း ထိတွေ့မှုကို မခံစားဖူးတဲ့ ကျမဟာ ရင် ဒိတ်ဒိတ်ခုန်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ပူထူ ရှိန်းဖိန်းသွားရပါတယ်..။ နောက်ပြီး ဝင့်ဝါက ရမ္မက်ပြင်းပြင်းနဲ့ နမ်းစုပ်တော့ ကျမ စိတ်တွေ ဟုန်းကနဲ ထကြွလာရတယ်…ရှင်…။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကျမရဲ့ နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်နယ် ဖျစ်ညှစ်ပစ်နေတာကလည်း ကြမ်းတမ်းလွန်းလှပါတယ်..။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုလည်း ဆွဲညှစ် ကစားပေးနေတယ်..။ အဲဒီကနေ ဝင့်ဝါရဲ့ လက်က အောက်သို့လျှောဆင်းသွားပြီး ကျမရဲ့ စောက်ဖုတ်အုံကြီးကို အုပ်ကိုင် ဖျစ်ညှစ် လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ….
ကျမနှုတ်မှ မချင့်မရဲ ညည်းတွားမိလိုက်ပါတယ်…။ သွေးသားတွေလည်း အရမ်းပဲ ဆူဝေလာပြီ..။
“ အန်တီငြိမ်း စောက်ဖုတ်ကြီးက အရည်တွေ ရွှဲနေပြီပဲ… သိပ်တောင် နှူးစရာ မလိုတော့ဘူး..ဝင့်ဝါရဲ့ ပစ္စည်းအသစ် မိတ်ဆက်ပွဲလေး စလိုက်တော့မယ်နော်…”
“ ဝင့်ဝါရယ်..သမီး သဘောပဲ.. အန်တီငြိမ်းတော့ ဘယ်လို ခံစားရမှန်းတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး…”
“ ခစ်ခစ်….နောက်ပြီးရင် ဒီထက်ဆန်းတာတွေ လာအုံးမယ်လေ… အန်တီငြိမ်းရဲ့…”
ဝင့်ဝါက ခုတင်ပေါ်မှ ထကာ ခြေရင်းတွင် ချထားသော သူမယူလာတဲ့ လီးတုကြီးကို လှမ်းယူလိုက်ပါတယ်..။ ဝင့်ဝါလက်ထဲက ဟာကြီးက ကျမကို ပို့ပေးထားတဲ့ လီးတုကြီးနဲ့ မတူပဲ တစ်မျုိး ဆန်းသစ်နေပါတယ်..။ လီးတုကြီးနောက်မှာ ကြိုးတွေနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာကို တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်..။ ကျမလည်း မင်းမင်းနဲ့ အတူ ဆန်းသစ်တဲ့ ကာမဖီလင်တွေကို ခံစားနေကြဆိုတော့ ဝင့်ဝါလုပ်သမျှတွေကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကိုယ့်အဖုတ်ကြီး ကိုယ်ပွတ်ရင်း ငေးကြည့်နေမိပါတယ်..ရှင်..။ ဝင့်ဝါက လီးတုအတန်ကြီးရဲ့ နောက်မှ သိုင်းကြိုးနှစ်ခုကို ခြေထောက်တွင် စွပ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီဝတ်သလိုမျိုး ဝတ်ဆင်ကာ အပေါ်ဘက်ရှိ ခါးပတ်လို ကြိုးကို သူမခါးတွင် ပတ်၍ ဝတ်ဆင်လိုက်သည်..။ ဝင့်ဝါပုံစံက ပေါင်ကြားထဲမှာ လီးပေါက်နေတဲ့ ကြွေရုပ်မလေး ပုံစံ ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်ရတော့ ကျမစိတ်ထဲ တစ်မျိုးကြီး ခံစားရလိုက်မိသည်..။ ဝင့်ဝါက….
“ အန်တီငြိမ်း… အလိုးခံရင် ဘယ်လိုပုံစံကို အကြိုက်ဆုံးလဲ..ဟင်…”
ဝင့်ဝါပေါင်ကြားထဲမှ လီးတုကြီးက တန်းမတ်ကာ တကယ့်ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ လီးကြီးလို အသားရောင် ဖြစ်သည်.။ မင်းမင်းရဲ့ အောကားတွေ ကြည့်ပြီး အလိုးခံခဲ့စဉ်က တွေ့မြင်ရတဲ့ အမေရိကန် လီးကြီးနီးပါး တုတ်ကာ ရှည်လျားလှသည်..။ ဒီလီးမျိုးနဲ့ ကျမအကြိုက် ဖင်ပူးထောင်းထောင်ကာ အလိုးခံရရင် သားအိမ်တောင် ပေါက်ထွက်သွားနိုင်လောက်သည်..။ ထို့ကြောင့် လီးအဝင်သက်သာပြီး အကောင်းဆုံး အရသာတွေ ပေးတတ်တဲ့ လှေကြီးထိုးရိုးရိုး ပုံစံနဲ့ပဲ ခံဖို့ နေရာယူပေးလိုက်ရပါတော့သည်..။ ဝင့်ဝါက လီးတုကြီးကို တရမ်းရမ်းဖြင့် ခုတင်ပေါ် တက်လာကာ ဒူးထောင်ပေါင်ကား ပက်လက်ကြီးလှန်ပေးထားတဲ့ ကျမပေါင်ကြားထဲမှာ နေရာယူလိုက်ကာ သူမခါးမှ လီးတုကြီးကို လက်ဝါးထဲ တံတွေး ထွေးထည့်ပြီး သုတ်လိမ်းနေတာ တွေ့လိုက်ရသည်..။
“ အန်တီငြိမ်း စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ ဝင့်ဝါ လီးကြီး ထည့်လိုက်တော့မယ်..နော်..”
ပြောပြောဆိုဆို ဝင့်ဝါက သူ့လီးတုကြီးကို ကျမရဲ့ စောက်ခေါင်းဝကို ဖိကပ် တေ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်..။ အေးစက်စက် အထိအတွေ့ကြောင့် တစ်မျိုး စိတ်လှုပ်ရှားသွားရတယ်..ရှင့်..။
အမလေး…အီး….ဖြေးဖြေး…ကျပ်နေ တယ်… သမီးရဲ့….အ….အီး…..”
လီးတုကြီးက အဆမတန် ကြီးနေတဲ့အပြင် အပေါ်ယံတွင် သွေးကြောလို အဖုဖုတွေကြောင့် နာကျင်ဆိမ့်ကောင်းတဲ့ အရသာကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်…။ ဝင့်ဝါကတော့ ကျမ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကို တံကောက်ခွက်က ပင့်မထားလိုက်ပြီး သူမခါးကို ကော့ကာ အဆုံးထိ ဖိချသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်..ရှင်..။
ဝင့်ဝါက အဆက်မပြတ် ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်လိုးပေးနေရာ ရှည်လျားလှတဲ့ လီးတုထိပ်ဖူးကြီးက ကျမသားအိမ်ကို အချက်တိုင်းလိုလိုပဲ လာဆောင့်နေပါတော့တယ်..။ တစ်ခဏအတွင်းမှာပင် ဆန်းသစ်တဲ့ အထိအတွေ့နဲ့ အလိုးခံနေရမှုကြောင့် ကျမ စောက်ဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး ကျင်ဆိမ့်ထူပူလာတော့တယ်..။ ကျမကိုယ်ပေါ်မှ ကိုင်းကာ လိုးပေးနေတဲ့ ဝင့်ဝါနို့အုံတွေက ကျမ မျက်နှာနားတွင် ဝဲခါနေတာကြောင့် ဖမ်းဆွဲဆုပ်ကိုင်ကာ မမှီမကမ်း လှမ်းစို့ပေးလိုက်ပါတယ်..။
“ အိုး….အန်တီငြိမ်းရယ်…ဟုတ်တယ်.. စို့ နာနာစို့…ဝင့်ဝါနို့သီးခေါင်းတွေကို စို့ပေးစမ်းပါ..”
ဝင့်ဝါက အကြိုက်တွေ့သွားကာ သူမကိုယ်ကို ပိုကုန်းပေးလိုက်ပြီး ကျမ ပါးစပ်ထဲသို့ သူမနို့တွေကို တေ့ပြီး အစို့ခံနေပါတော့တယ်..။ အပေါ်မှလည်း ခါးအားကို သုံးပြီး ဖိသွင်းလိုးချပေးနေတဲ့ အရှိန်က ပိုမိုအားပြင်းလာပါတယ်..။
“ အွန့်….အွန်း…ဟင်း…အု…ဟင်း.အား ရှီး…….ဆောင့်ချ…ဝင့်ဝါ..လိုး ဆောင့်…အန်တီငြိမ်း ပြီးတော့မယ်.. အ…..အမလေး…အု…အွန်း….အွန်း…အား.ရှီး..”
ကျမဟာ အရမ်းကို ဟော့လာရပါတယ်..။ ဝင့်ဝါနို့တွေကို ငုံစုပ်ပေးလိုက်၊ ပါးစပ်က တစ်တစ်ခွခွစကားတွေ ပြောလိုက်နဲ့ ကာမခရီးဆုံးကို ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်..။
ကျမဟာ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးတုကြီးကို ဆွဲဆွဲညှစ်ရင်း အရည်တွေ ဒလဟော ပန်းထုတ်ကာ ဝင့်ဝါနို့တွေကို ပြတ်ထွက်လုမတတ် စို့ယူရင်း ပြီးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်..။
“ ဝင့်ဝါရယ်… အန်တီငြိမ်းတော့ ဒီတစ်ချီတည်းနဲ့ မျော့သွားတော့တာပဲ..”
“ ခစ်ခစ်….မမျော့ပါနဲ့အုံး ..အန်တီငြိမ်းရဲ့ ခုမှ အစပဲ ရှိသေးတာ…ဝင့်ဝါကိုလဲ လုပ်ပေးပါအုံး…”
ဝင့်ဝါက လီးတုကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲမှ ချွတ်ယူလိုက်ပြီး သူမခါးမှ ဖြုတ်ယူလိုက်သည်..။ ထို့နောက် ကျမစောက်ရည်တွေနဲ့ ပြောင်လက်စိုရွှဲနေတဲ့ လီးတုကြီးကို ပါးစပ်နဲ့ ပြွတ်ခနဲ စုပ်ယူလိုက်ပြန်သည်..။ ပြီးတော့ ကျမကို ဆွဲယူကာ ပါးစပ်ထဲ လီးတုကြီးကို တေ့ပြီး စုပ်ခိုင်းလိုက်၏..။ ကျမဟာ ကြီးမားလှတဲ့ လီးတုကြီးကို မဆံ့မပြဲဟကာ ငုံယူပြီး အရသာခံ စုပ်ယူနေမိပါတော့တယ်..။ အဲဒီနောက် ဝင့်ဝါက ကျမကို လီးတုကြီး တပ်ဆင်ပေးပြီး အောက်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်စေကာ သူမက အပေါ်မှ ခွကာထိုင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဆောင့်ချပါတော့တယ်..။ အဲဒီညက ဝင့်ဝါနဲ့ ကျမဟာ ဘယ်နှချီမှန်းမသိတော့အောင် တစ်ယောက်တစ်လဲ လီးတုကြီးနဲ့ လိုးကြဆော်ခဲ့ကြပါတော့တယ်..။
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 10:12